Ogologo oge na-agbanyeghị ọkụ ọkụ na-emepụta ọkụ na China
Home / Ọkụ na-ekpo ọkụ / Ogwe ọkụ na-agba ígwè / Ọkara Frequency Coreless agbaze Ọkụ
Ogologo oge ebighi ebi nke ikpochapu oku
Categories: Ọkụ eletrik, Igbt tilting induction agbaze oku, Ọkụ na-ekpo ọkụ, Ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ, Ogwe ọkụ na-agba ígwè Tags: zụrụ ọkụ ọkụ ọkụ, Zụrụ Ọkara ugboro ole na-agba ọkụ, ọkụ na-ere ọkụ ọkụ, nnukwu ọkụ ọkụ ọkụ, induction na-agbaze ọkụ ọkụ, Ọkụ ọkụ na-enweghị ọkụ, Ogologo ugboro ugboro na-agbaze, Ogologo oge na-agbanyeghị ọkụ ọkụ, usoro ugboro ugboro na-agbaze usoro, MF na-agbanye ọkụ ọkụ, MF na-agbanye ọkụ ọkụ ọkụ maka ire ere, MF na-agbanyeghị ọkụ ọkụ
Ogologo oge nke ikpochapu ikpochapu ahihia;
1) Ọkara Ogologo ụbụrụ na-agbaze ọkụ
2) Usoro onyunyo dijitalụ zuru oke
3) Nchara ígwè, ígwè, igwe anaghị agba, ọla kọpa, aluminom
5) Nrụpụta ọrụ ike, ịgba ọsọ ngwa ngwa, ọkụ ọkụ ọkụ dị mma.
6) Ahịa shea akwa onu ogugu, hydraulic tilting.
3.Usage: Ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-agbanyeghị na ígwè agba, ígwè, ọla kọpa, aluminom na ngwongwo, nwere nnukwu mgbapụta nke ọma, ezigbo ọkụ ọkụ na-ehicha ọkụ, ezigbo ụdị ígwè, obere ọkụ ọkụ, ịrị elu okpomọkụ ngwa ngwa na ụdị ígwè ọ bụla agbaze.
4.Characters na Uru:
1) Nrụpụta ọrụ ike, ịgba ọsọ ngwa ngwa, ọkụ ọkụ ọkụ dị mma.
2) Ụdị mgbatị ọsọ ọsọ na-amalite, gbanwee ka a chọrọ ịmalite ugboro ugboro.
3) Ọrụ nchebe zuru oke, dị ka nchebe na-enweghị atụ, nchebe n'elu, nchebe nke ugbu a, nchebe volta, nchebe mmiri, na nchebe ndabere, ihe eji eme ihe nwere ike ịdabere na mgbapụ ọsọ ọsọ.
4) Ọ dị mfe iji rụọ ọrụ, kwadoro maka usoro nkedo niile.
Otu oku agbaze oge nwere ike ibu ngwa ngwa dika <40 nkeji! Ihe ike nke oku na-erute steeti kachasị elu (≧ 0.96)!
Mgbe a na-enwu ọkụ, n'agbanyeghị agbanye ọkụ ọkụ na-agbanwe, ọkara ike ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ mgbe niile. Nke ahụ bụ ikwu, na-enweghị ọrụ nhazi ntụziaka, usoro dum site na ịmalite na njedebe, ike ikuku ugboro ugboro ga-enwe ike ịnapụta ike kachasị n'ọkụ.
Ngwusi ike ike na-asọ oyi (nkedo ígwè banyere 530 kwh / T)! E jiri ya tụnyere ike ike na-agbanye ike na-echekwa banyere 20%.
- Ihe ngosi
Na-eme ka uru kwekọrọ ekwekọ ụwa na voltaji dị mma!
Site n'iji usoro inye ọkụ ọkụ zuru oke, na usoro ọrụ dum nke onye na-edozi ihe bụ mgbe nile na-emeghe (ya na onye na-agbazi diode), anaghị eme ka harmonic dị elu, isi enweghị mmetọ na netwọk ike, adịghị emetụta arụ ọrụ nke ike nke mmeghachite ike na-akwụ ụgwọ.
Ngwá ọrụ ntinye ntinye nke firs-class nwere ike belata mgbapụta uhie.
Ndaba nke ntinye nke ikpo oku nke otutu oku na-agbanyeghi oku na-acho 25% nke ike zuru oke, ya mere ihe omuma sayensi na ihe di nma bu ihe di mkpa. Mgbe anyị na-emepụta mgbidi ahụ, anyị na-eburu ọla kọpa nke TU1 dị elu, na nkwonkwo ụrọ na-ejide ọlaọcha ọlaọcha dị elu, nke nwere akwa conductivity na ntakịrị ọnwụ. Iji jide n'aka na ọ ga-akacha mma, a na-etinye ihe mkpuchi ahụ n'etiti etiti, a na-eme ka ikuku mkpuchi dịkwuo elu ma nweta nrụpụta eletrik kachasị elu.
Anụ & Nchedo gburugburu ebe obibi
Nhọrọ akụrụngwa dị elu iji hụ na ihe eji akụrụngwa.
①Imported elu nsogbu carbon-free sooks na 304 igwe anaghị agba nchara mwekota: inogide!
②Onye na-ebugharị eriri eriri eriri na-ebute ihe mgbaàmà nke mgbaàmà: ike siri ike nke nnyonye anya na ịrụ ọrụ siri ike
③Ike elu dị elu nke dị mkpa Thyristor, ihe nkedo nke mmiri dị jụụ (HengYang Patent No.).
④Inye ihe odide a na-ahazi: ọdịdị nchara, ikpuchi mkpuchi dị elu, na-eji nnukwu ike nke magnesium alloy alloy, ihe ndị ọzọ na-emebi emebi na ihe ndị ọzọ.
⑤Ibu ọla kọpa: Nnukwu ọla nwere ike ibelata ọkụ ọkụ wee zọpụta ike! Ngwá akpụkpọ anụ ájá na mgbochi ihe ngbochi, nkwụsị kọntaktị na-akpa àgwà karị, ọdịdị ahụ adịghị akpọnwụ ma mee ka ọ maa mma!
⑥Igbanwe mgbanwe (mgbanwe): mgbe ọkụ dojuru ọkụ ma ọ bụ na-atụgharị ya, ọ ga-ekwe omume ijikwa ike nke otu ọkụ n'emeghị ka ọrụ ọkụ nke ọzọ dị. Ebumnobi nke nchebe na imekorita.
⑦Plate heat exchange (HengYang Patent No.): iji hụ na mmiri dị jụụ na akụrụngwa, na igbochi mmiri siri ike na-esi na ya abanye. Lezie anya iji belata mmefu ngwá ọrụ.
- Nchedo gburugburu ebe obibi
Igwe ọkụ na-agbaze agbaze na-enweghị isi na-eji ikuku na-ekpo ọkụ na ọkụ ọkụ ọkụ - mkpuchi mkpuchi ọkụ, uzuzu uzuzu (mgbanaka) site na ikuku na-amịrị uzuzu, gas na-ekpo ọkụ na-agbaze, rute ma melite nsonaazụ nke ọkụ ọkụ, iji mezuo mkpa nke mmetụta gburugburu ebe obibi. nyocha nyocha.
Ụdị Isi na Nka na ụzụ
Ntinye ike (50 / 60HZ) Mmepụta ike A na-eri ume (KWH / T)
EAF tinye ikike ọkụ ọkụ Ike akara (KW) Volta na-abata (V) Oge na-abata abata (A) Imeghari nọmba ụda Nyegharia ike nhazi ike (KVA) Volta DC (V) Direct ugbu a (A) Volta ugboro ugboro (V) KHZ ugboro ugboro Oge nkwụsị (Nkọ) Ghara ígwè Red ọla kọpa Brass aluminom
GW – 0.35T 250 380 400 6 Usoro 315 nke atọ 500 500 750 1 20-45 560 420 390 540
GW – 0.5T 350 380 560 6 Usoro 400 nke atọ 500 700 750 0.8 30-50 550 410 380 530
GW – 0.75T 500 380 800 6 Usoro 630 nke atọ 500 1000 750 0.8 40-50 550 410 380 530
Usoro 1000 nke atọ
1250 ugboro atọ
Usoro 1250 nke atọ
Usoro 1800 nke atọ
1800 ugboro atọ
GW – 3T 2000 750 820 12 2500 ugboro atọ 990 1010 1480 0.5 50-70 510 370 340 490
GW – 5T 3000 950 1140 12 4000 ugboro atọ 1260 1190 1900 0.3 50-80 500 360 330 480
GW – 10T 6000 950 2280 12 8000 ugboro atọ 1260 2380 1900 0.3 50-90 490 350 320 470
GW – 15T 8000 950 1520 24 10000 anọ nke atọ 1260 1590 1900 0.3 50-90 480 340 310 460
GW – 20T 10000 950 1900 24 12500 anọ nke atọ 1260 1980 1900 0.25 50-90 470 330 300 450
GW – 30T 15000 950 2850 24 20000 anọ nke atọ 1260 2980 1900 0.25 50-90 470 330 300 450
Na-oku okpomọkụ: Nchara 1650 ℃ igba ígwè 1450 ℃ Red ọla kọpa 1150 ℃ Brass 1000 uminum Aluminom 700 ℃ Zinc 400 ℃
※ Ikike nke usoro ọkụ ọkụ na-agba ọkụ na-adabere na njupụta nke nchara 7.8 (njupụta nke aluminom bụ 2.7, ya mere, aluminum nke hà nhata: ike nhata bụ otu, na ikike dị mkpa X 3 ugboro ọkụ ahụ ọkụ )
※ Oge agbaze na ikike iri ọkụ nwere njikọ dị mkpa na ngwa ngwa nke jikọrọ ya, ọdịdị nke ihe ndị dị ndụ, ihe nchịkọta nke ihe onwunwe, nhazi ọrụ,
※ Na mpempe akwụkwọ dị n'elu, "ton oriri ike (kwh / T)" bụ usoro ọhụrụ nke ike oriri, nke ga-eri 15% ma ọ bụ karịa nke ike ọkọnọ na Usoro yiri nke ọkụ ọkụ
A-configuration Nhazi akụrụngwa: ike na-enye ike, ihe ndozi, ọkụ ọkụ (nchara sheel ma ọ bụ shei aluminom), ọdụ ụgbọ mmiri (ma ọ bụ onye na-ebelata) usoro tilting, eriri mmiri dị jụụ wdg;
※ Nke dị n'elu bụ data data ngwaahịa, nwere ike ịmepụta ike dị iche iche dịka njirimara onye ọrụ, ngwaahịa na-abụghị nke dị na agba ọsọ ọsọ.
Aluminium maka ire ere